विशेष आवश्यकताहरू र आत्मकेंद्रित - मन जीवित - मानसिक स्वास्थ्य र विश्राम
सबै भन्दा पहिले, "वाह !!" कस्तो जीवन परिवर्तक! म अब Adderall लिदै छु र मेरो मेमोरीमा सुधार आएको छ, मेरो hyperactivity चलाइएको छ - म नयाँ व्यक्ति हुँ! चेतावनी प्रो निश्चित रूप मा एक खेल परिवर्तक भएको छ!
महाबलेश्वर हेगडेबाट प्रशंसापत्र
हामीले केवल केही हप्ताहरूको लागि डेभिड डाइलाइट प्रयोग गर्न शुरू गर्यौं। मैले देखें कि मेरी छोरीको आवाज / संगीत संवेदी मुद्दा एकदमै कम आएको छ। उनी चिच्याउँछिन् / रोउँछिन् यदि उनी केही रेडियो पहिले कुनै रेडियो संगीत वा पप गीतमा पर्दा हुन्। हामी कुनै पनि पसलमा यस कारणका लागि जान सक्दैनौं। यद्यपि पछिल्ला केही दिनहरूमा हामी प्रत्येक पसलमा गइरहेका छौं र उनी कुनै संगीत वा ध्वनिबाट पनि चिन्तित छैनन्। कुनै पनि बच्चा जस्तै शान्त। घरमा पनि उनी धेरै जसो संगीत / ट्युनहरू द्वारा चिन्तित हुँदैनन्। यसले हामीलाई ठूलो राहत दियो। धन्यवाद।
लिंडा बी बाट प्रशंसापत्र
"मलाई यकिन थिएन कि यस उपकरणले कुनै असर पार्नेछ। मेरो मतलब हो, फ्ल्याशिंग बत्ती र बीपहरूले सचेत विश्राम प्रविधि अभ्यास गर्न नसक्ने एक असहाय बच्चाको दिमागका छालहरूलाई असर गर्ने थियो! मेरो पहिलो शर्त छैन। म एक वैज्ञानिक र स्केप्टिक हुँ।
हामीसँग २. weeks हप्ताको लागि DAVID इकाई छ।
हाम्रो छोरी ११. months महिनाको उमेरमा गम्भीर निद्राका सवालहरू लिएर घर आई। .11.5..5.5 बर्षसम्म उनी मसँग वा मसँग र मेरो नवविवाहित पतिसँग सहवास गरी। Every देखि १. hours घण्टा लाग्यो उनको लागि हरेक रात निदाउन कोठामा (हनीमूनमा) हामीसँगै बसे र उनी निद्राबाट ब्यूँझिन उठे भने। हामीले थेरापी गरिसकेका छौं, न्यूरो पुनर्गठन, लयबद्ध आन्दोलन थेरापी, ग्लूटेन / केसिन निःशुल्क आहार, पौष्टिक पूरक, DAN! परीक्षण, BIT / क्रसिनोलजी र शायद केहि चीजहरू म भुल्दैछु। उनी पनि हिंसात्मक विनाशकारी क्रोधमा ट्रिगर हुन्छन् जब उनी भावनात्मक रूपमा अभिभूत हुन्छन्। यी मध्ये केहीले सहयोग गरे, केहि गरेनन्, केहि हामी पक्का छैनौं, तर हानी गरेनौं। म कहिले काहिँ चिन्ता गर्छु कि उनले कहिले पनि आफ्नो भावनात्मक नियमनको नियन्त्रण प्राप्त गर्नेछ कि भनेर मलाई थाहा छ र मलाई थाहा छ यो अझै पनि सम्पन्न भएको सम्झौता होईन।
मैले AVE को बारेमा सुनेका थिए तर something$० डलर खर्च गर्न हिचकिचाई रहेकी थिएँ म उनी पनी आफ्नो टाउकोमा छोड्ने कुरामा निश्चित छैन। म अन्य उपचारहरूको लागि भुक्तान गर्न व्यस्त थियो! हामीले निर्णय गरेका छौं कि $० भाडा शुल्कमा जोखिम लिन हामी तयार छौं यसैले सहयोग पुर्‍याउँछ कि भनेर। उनी पहिलो दुई रात खुसी थिएनन्। त्यस पछि उनी minute० मिनेटको कार्यक्रममा निदाउन थालिन्। तीन हप्ता भन्दा कम पछि, उनी २० मिनेट भित्र निदाउँछिन्। त्यो १. hours घण्टा भन्दा धेरै छोटो छ (यो होइन कि म गणना गर्दै छु)। हामी ओछ्यानमा उनको साथ एक रिलक्सन व्यायाम को एक श्रृंखला गर्छौं। यदि उनी यी समयमा निदाउँछन्, उनी अब पर्याप्त पनी हामीलाई सम्झाउन कि उनी अझै पनी उनको "बत्ती" गर्न आवश्यक छ। हामी कार्यक्रम समाप्त गरौं यदि उनी सुतेको भए पनि यस समयमा अडियो र भिजुअल मार्गहरू निद्राको बखत खुला रहन्छ। हामी उनी युनिट पनि लगाउँदछौं यदि ऊ सुताउँछिन् यदि उनी हामीलाई गहिरो र आरामदायी निद्रामा गएको महसुस गर्छिन्।
वाह! हामी अँध्यारोमा १. hours घण्टा कुटपिटको पर्खाइमा पर्दै नभएकोमा रोमाञ्चित थियौं, बच्चाको निदाउन थाल्यो। (कसले उनलाई दोष दिन सक्छ? के तपाईं यसलाई यत्रको निम्ति निद्रामा लाग्न धेरै समय लाग्नुभयो भने?) म कहिले पनि विश्वास गर्दिन कि हामी यस थोरै समयमा र यो सानो विरोधमा यी प्रकारका परिणामहरू प्राप्त गर्नेछौं। मैले वाह भने? वाह !!!!
आज बिहान मैले उनलाई समातें जब उनी भावनात्मक अनियन्त्रित क्रोधमा ट्रिगर गर्न थालिन्, मैले उनलाई भने कि बत्तीहरूले उनलाई शान्त गराउँदछ। Minutes मिनेट भित्र, उनको सास शान्त थियो र उनी कार्यक्रममा समाप्त भएपछि पूरै सहकारी र गैर-विपक्षी थिए। ऊ निदाएको थियो।
त्यसोभए, मलाई थाहा छ म एक इन्फ्रोमेरियल जस्तै लाग्न सक्छु र मलाई अनुभवबाट थाहा छ कि यी कुनै पनि समाधानहरू एक-साइज-सोल्भ-सबै होइनन्, तर $$० डलर वास्तवमै सानो मूल्य हो जुन केही राम्रो जटिल विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने मौकाको लागि भुक्तान गर्न पर्दछ। । मलाई केवल दु: खी लागेको छ मैले यो जति सक्दो गरें। र होईन, म आफूले विश्वास गर्ने कसैलाई काट्ने छैन। :) "
करेन सिमन्सबाट प्रशंसापत्र
असाधारण संसाधन - www.exceptionalresources.com
सेप्टेम्बर 20, 2001
“डेभिड मेशिनले मेरो छोरा जोनाथनलाई अटिजमको साथ कत्ति धेरै मदत ग with्यो भनेर म अत्यन्त प्रभावित भएँ कि अरूलाई सहयोग गर्न मैले मेरो स्वस्थता केन्द्रको स्थापना गरें। तीन वर्षको उमेरमा, हामीले उहाँमा यो थेरापी प्रयोग गर्‍यौं, जसले फ्ल्यासिंग लाइटहरू र पल्सिंग टोनहरू प्रयोग गर्दछ, छ हप्ता अवधिमा। यस समयमा र त्यसपश्चात उनका नकारात्मक आचरणहरू कम भए, आँखाको सम्पर्कको साथसाथै सामाजिक रूपमा संलग्न हुने उनको क्षमता पनि बढ्यो, ऊ बढी बोलेको छ र अरूलाई संचारमा संलग्न गराउन अझ सक्षम भएको छ।
मलाई विश्वास छ कि डेभिडले संसारमा सबै फरक पार्छ जुन उहाँ आज हुनुहुन्छ र यसलाई पूर्ण रूपमा सिफारिस गर्नुहुन्छ आत्मकेंद्रितको साथ साथै अरू सबैका लागि।
अब जब पर्याप्त अनुसन्धान पूरा भइसकेको छ, मलाई आशा छ कि धेरै व्यक्तिहरूले यो नयाँ दृष्टिकोण औषधि सम्बन्धी विकल्पहरूको सट्टामा प्रयोग गर्ने छन्। ”
ऐलिस निक्सनबाट प्रशंसापत्र
अप्रिल 18, 2001
“मैले सोचें कि तपाईलाई थाहा दिनुहोस् कि नेथनले डेभिडको साथ ठूलो काम गरिरहेको छ ... उसको क्षेत्र विस्तार हुँदैछ ... शीतल छ ... पहिलो पटक रूख चढाईरहेको छ ... स्कूलको बसमा कम चिन्तित र डराएको… गुड फ्राइडेमा चर्चमा पनि बसें। दुई घण्टा को लागी Squeਗਲ बिना ... आश्चर्यजनक… र केवल days दिन पछि। यो मलाई मन पर्छ! फेरि पनि धन्यबाद।"
सुसन क्लिन्जेनबर्गबाट ​​प्रशंसापत्र
सेन्ट पल, मिनेसोटा, संयुक्त राज्य अमेरिका
मार्च २,, २०० ((अपडेट)
हामी अझै पनि DAVID माइकल (र आफैलाई) संग हरेक रात प्रयोग गर्दछौं। हामीलाई समझदार राख्छ। मैले DAVID लाई धेरै बर्षमा सिफारिस गरेको छु। एक स्वतन्त्र बच्चा संग हुन बिल्कुल आवश्यक।
जुन 1, 1998
"डेभिड मेशिनले माइकलको लागि चमत्कारहरू गर्यो, किनभने यो एक मात्र तरिका हो कि ऊ आराम गरेर जमीनमा पुग्न सक्छ। हामीसँग सुरुमा गाह्रो समय थियो। अरू सबै बच्चाहरू र म आफैंले यो एक महिनाको लागि प्रयोग गर्दै थिए र वास्तविक लाभहरू हेरिरहेका थिए, जस्तै बढ्दो एकाग्रता, रमाइलो, र कुनै निद्रा समस्याहरू।
माइकल जो गम्भीर रूपमा अटिस्टीक थिए, कुनै अपरिचित चीज मनपर्दैन, त्यसैले हेडफोन लगाउनको लागि हामीले उनलाई बिस्तारै रोक्नुपर्‍यो, र उनी २१ हप्ता सम्म स्थिर रूपमा लडे, २१ औं दिनसम्म केही भयो र उसले आराम गर्यो। यो नाटकीय परिवर्तन थियो, उसले सुन्न र गिगिंग गर्न सुरु गर्यो र यसलाई बन्द गर्न चाहँदैन। यस समयमा, हामीले नेत्रसेट को उपयोग गर्न को लागी पनि प्रयास गरेनौं। भोलिपल्ट, मैले उनको शिक्षकबाट एक नोट प्राप्त गरें, "के भएको छ?" माइक शान्त छ र हामी आँखाको सम्पर्क देखिरहेका छौं, जुन यो भन्दा पहिले अस्तित्वमा थिएन। मैले तिनीहरूलाई एक महिना पछि नभन, कि मैले उनीमा डेभिड प्रयोग गरिरहेको छु। उसको व्यवहार सुधार भयो र ऊ परिवर्तन गर्न एकदम कम प्रतिरोधी थियो, विशेष गरी "संक्रमण समय" सँग, जुन डिल गर्नको लागि रात हो।
आँखा सम्पर्क माइकल लगातार सुधार देखाउन जारी, उनी अन्तमा "हामी संग" थियो, र आत्मिकता संग कि हामीलाई यति सख्त आवश्यक पुल थियो। यो भन्दा पहिले, माइक पहुँचयोग्य थिएन। यति पहुँचयोग्य नभएकोले यो निराश देखिन्थ्यो, केवल मलाई मात्र होइन तर तिनका शिक्षकहरूलाई पनि। त्यो प्रमुख सफलता पछि हामीले सुस्त, तर स्थिर प्रगति गरेका छौं। यदि यो हासिल गरिएको छैन भने, म के भएको हुन सक्छ भनेर सोच्न काँपिरहेछु। आँखा सम्पर्क माइकको साथ DAVID प्रयोग को एक सीधा परिणाम थियो।
अन्य प्रमुख फाइदाहरू hyperactivity मा कमी र निद्रा प्रतिरोध मा कमी हो। त्यसैले हामी सबै यहाँ वरिपरि एक सानो सेनिटी राख्न सक्षम छौं। डाक्टरहरूले माईक ट्राजाडोन, एम्बीम, भेलियम दिएका छन्, र कुनै पनि काम गरेनन् किनकि यसले मस्तिष्कको क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने असर गर्दैन। एक बच्चा भएको छ जो तीन दिन सम्म निन्दित गर्दैन थकाउने छ, र अब, २२ सेट गर्दै, उसलाई सुरक्षित निद्रामा पठाउँदछ। यो हप्ता धेरै राम्रो भयो! ऊ बत्तीलाई माया गर्छ, र यसले प्रभाव डबल गर्दछ। सत्र सकनु अघि ऊ निदाइरहेको छ। माइकको मनपर्ने सेटिंग्स १ 22, २२ हो जसमा being१ जनाले उनलाई सबैभन्दा बढी आनन्द दिन्छ। गाह्रो रातमा, म then१ गर्नेछु त्यसपछि २२. आकर्षण जस्तो काम गर्दछ! ऊ अन्य सेटिंग्स प्रति प्रतिरोधी छ, तर हामी प्रयोग गर्दैछौं। ऊ बाइनोराल बीट सेटिंगको उत्तम आनन्द लिन्छ। तर ती तीन सेटिंग्स उहाँको मनपर्ने छन्। मसँग अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ।
यसमा उनले डेभिड प्रयोग गर्न सुरुमा लिन तीन हप्ता समातेर र कराइरहेको थियो, अब उनी रातको लागि सोध्छन् यदि म मेरो तालिकामा पछाडि छु। र उसले यो प्रेम गर्दछ। अब हामी केहि भाषण सुन्दै छौं। यो गत महिना माइक (पहिले गैर-मौखिक) ले 'माथि, जानुहोस्, तल, तयार-सेट-जानुहोस्' भनेको छ। उसले ती आवाजहरू एकरूपता र उचित बनाउँदछ। एक प्रमुख ब्रेक-थ्रु! ऊ 'सबै भयो' र 'क्यान्डी' को लागी साइन इन गर्दैछ। म धेरै खुसी छु! वर्षौंदेखि भनिए पछि उहाँलाई एक संस्थामा राख्नुहोस् व्यवहारको समस्याका कारण, र उनीहरू कसरी खराब हुँदै जान्छन्, राम्रो छैन। म अन्ततः ती व्यक्तिहरूलाई भन्न सक्छु तिनीहरू गलत थिए, र धेरै प्रगतिको आशा गर्न सकिन्छ, प्रमोदवनले माइकलको लागि केहि ढोकाहरू खोल्यो जुन अन्यथा बन्द नै रहेको हुन सक्छ। म भर्खरै तपाईंलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु, र तपाईंलाई हाम्रो अनुभव बताउन चाहन्छु।
मैले कसैलाई कहिले पनि उल्लेख गरेन जुन हामी DAVID को सुरुमा प्रयोग गर्दै थियौं र उसको प्रि-स्कूलले उसको नोटबुकमा लेख्यो 'बिग चेंज, के भयो? महान आँखा सम्पर्क र अधिक धेरै सहयोग! ' यो डेभिड प्रयोग गरेको एक महिना पछि भयो। प्रभाव छिटो थियो। अझै माइकल आराम गर्न हरेक दिन यसको प्रयोग गर्नु पर्छ। उसले इशारा गरेर सोध्यो। ”